MAXKAMADAHA ISLAAMIGU MA ISLAAM BAA???
ISLAAMKU WAA DIIN IYO DAWLADD.
Bismi –llaahi. Dadka Soommaaliyeed, wax-walba oo qiimo leh , ayaa ka burburay, kaas oon ku koobnayn, Dawladda, dalka iyo dadka oo kaliyaa sida dad badani u haystaan, balse waxuu brburku saameeyay diintii muqaddaska ahyd oo waxaa soo gaartay dhibaatooyin aan ka yareen kuwa soo gaaray dhinacyada kale,
Dhibaatada Diinta soo gaartay 14 sano ee baabba’a iyo baadida lagu jiro, waa mid dhinacyo badan ,Waxaanse maanta ku eegayaa qormadaan waxa loogu yeero MAXKAMADAHA ISLAAMIGA AH, Waxaanan si deggan u falan-qaynayaa, Bal in maxkamadahaasi yihii kuwo run ahaan ku sifoobay magaca loo la baxay oo ay islaamka waafaqsanyihiin, iyo in uu yahay magac been ah oon Islaamku ka beri-yahay.
Waxaynu wada ognahay Jabhadaha tiro beelay ee magacooda uu ku wada-jiro xarafka S, oo ka taagan Somali, Somalinimadu ka beri tahay maxkamaduhuna masidaas oo kale bay u sitaan magaca Islaamka??
Waxaan u guda-gelayaa mawduuca si uuna innoga baahin in ay Caddayno arimahan:
1- Aragtida Nidaamka Ismaamka iyo xukunka
2- Aragtida Islaamka iyo Xaaladda Somalia.
Markaa kadib ayay kala cadaan-doona dhinaca aan u ridayno Jawaabta su’aasha cunwaanka u ah mawduuca.
Waxaanse hormarinayaa wax-yar oo hordhac ah oo aan ku iftiimiyo nidaamka Eebe u dejiyay Arladaan aan ku noolahay haadaan nahay Bani-Aadamka, iyo makhlooqaad kale oo fara badan oo qaarkood Alle innoo sheegay, sida noolaha berida, kan badda, dhirta, dabaylaha, roobka, barafka, biyaha , kulka iyo waxa dhulka dushiisa saaran sida buuraha iyo hoostiis kuwa ku jira sida macaadinta…iwm.
Waxaa kale oo Eebe ku abuuray dhulka waxyaalo aan la inno sheegin. Kuwaa danbi waxaa ka mid ah qaar la doonayo in Cilmi-baaris joogta ah wadno si ay u ogaano, waana tana Banii Aadamku ku kashifayo oo uu ku ogaanayoo taarikhdiisa da’da wayn, mar-walba waxyaalo cusub oo ka baranayo Caalamkan aa ku noolahay, waxaa la yiri waxa Alle uumay wax aad taqaanaan iyo wax aydaan aqoon, taas macnaheedo ma aha ma barab kartaan.
DHULKA IYO KHILAAFADIISA:
Markii Eebe dhulka taagay, wuu islaaxiyay, wax kasta oo nolosho u baahantahayna, wuu u dhamaystiray, marka soo doonay-boqorku- in dhulka uu sidaa u hagaajiyay, waxaas oo khalqi ahna ku abuuray, in uu u sameeyo khaliif. Oo ay macnihiisu yahay WAKIIL EEBE.
Caza wa jalla, markuu arintaa u sheegay Malaa’igtiisii u dhowayd, way yaabiin, oo waatay yiraaheen : Eebaw, ma dhulka sidaas aad u wanaajisay ayaad u dhiibaysa, oo aad u wakiilan-haysaa , kuwo halleeya oo dhiigana quba?
Waad la socotaan jawaabtii Eebe ku aamusiiyay, oo ahayd : wax aydaan ogayn baan ogahay.
Kaddibna Aabehayn Nabi Aadam baa la abuuray, kaddibna waa tii Imxixaanka laga qaaday Isaga iyo maLaa’igtii, oo waxaa looga qaaday aqoonta waxayaalo dhulka xirir la leh, waana kii Abbe halkaas guushii tartanku ku raacday.
Kaddibna la faray Malaa’igtii in ay u sujuudaan Aadan salaan iyo ixtiraam ahaan. Ibliisna diiday sarayntaa Aadam la siiyay, halkaana ku hoogay, Aadanna loo caleemo-saaray, haddan isticmaalo luqadda maanta, KALIIFkII DHULKA, ama wakiilkii Ilaahay, amase BOQORKII dhulka. ( al.baqara Aayadaha 29-37 ).
Waxaan wada ognahay, in haddii madaxnimo loo doorto qof ay la socoto, mas’uuliyadd, haddaba waa maxay mas’uulidda Nabi Aadam laga saara dhulka ?
Waa mas’uuliyad ku wajahan Banii Aadanka, oo looga ilaalinayo Dhulka FASAHAADKA, oo ah wixii kharibayaa, oo dhibaato u gaysanaya noolaha iyo waxaan noloolaynba. Dhibkaasina wuxuu ka imaanayaa Aadamaha oo qur ah, khalqiga kale oo dhan way u hoggansanyihiin nidaamka loo dajiyay dhulka , wax tacaddi ah iyo xumaan ah ka iman-maayo xaggooda. Waa Mas’uuliyad ama waajib la saaray Aadamaha oo ku wajahan isla Aadamaha. Waajibkaas wuxuu leeyahay laba dhinac:
A- waa cibaadu Alle: oo Eebe lagu raali-gelinayaa. Oo tani waa mid Makhluuqaadka kalana la saaray, laakin Ikhtiyaar lama siinin, oo iyagu si AUTOMATIC ah bay Alle u caabudaan, Aadamigase waxaan la siiyay awood uu amarka ku yeelo ama uu ku diido. Oo waa Ikhtiyaar leh, waana meesha sarto ka quruntay.
B- Waa Cammiraadda dhulka iyo dhismihiisa, oo waxay ku wajahantahay, sii hor-u-marinta, waxa nolosha Aadamiga sahlayaa ama sii qurxinhaya
C- Waa ka ilaalinta dhulka fassadka Oo iyana waxay ku wajahantahay Aadamaha, oo waa dadka waxaa laga celinayaa in ay ku tacaddiyaan nolasha Arlada iyo oonka ku noolba,
Saddexdaas oo la mideeyay ayay ku salaynsantahay, khilaafadda Aadamaha ee Arlada, waana waxa loo yaqaan AMAANADA, ee uu Ina Aadam xambaaray Alle horti makii khalqiga kale wada diideen.
Khilaafaddaan oo Aadan ka soo bilaabatay, waa mid la joogteeyay, oo soconaysa ilaa Alle ka dhaxlo dhulka iyo waxa saaran korkiisa (waan qiyaamaha).
Intii Nabi Aadan ka danbeesay Mas’uuliyadda arlada waa la sii kala dhaxlayay, jiilba jiil buu u sii gubinayay, markii qolo fasahaadkeedu bataba Nabi baa loo soo bixiyaa ku toosiyaa waddada saxda ah ee ay ku liibaanayaan Aakharo, kuna islaaxinayaan noloshooda adduun.
markay diidaanna waa la rogaa, qolo kalana waa lagu beddalaa. Nabiba Nabi-baa daba joogay ilaa laga gaaro Nabigii Ugu Danbeeyay Moxamed( SCS), oo loo soo dhiibay Nidaamkii ugu danbeeyay ee khilaafadda Arlada oo ah ISLAAMKA.
ARAGTIDA ISLAAMKA EE XUKANKA:
Nidaamkan cusub waxa Eebe soo dijiyay, waqti Aadamuhu meel sare ka gaaray xagga tirada, Caqliga, Ilbaxnimada farsamda. Sidaa darteed wuxuu kaga duwan-yahay Nidaamyadii ka horeeyay arimaha soo socda:
1- Waa nidaam CAALAMI ah ( International system) oo aan quruun gaar ah khaas ku ahayn sidii kuwii ka horeeyay.
2- Waa Nidaam waqti-walba iyo meel.kasta ku dabaqmi-kara, Haddan si kale u iraaho, sidaa uu ugu habboonaa in lagu dhaqo Bulshadii joogtay casrigii Nabiga ( SCS) ayuu ugu habboon yahay in lagu dhaqo dadyawga ka danbeeya ilaa laga gaaro qiyaamaha.
3- Waa Nidaam isugu jira DIIN IYO DAWLADD, oo ah laba aan midna midka kale la’aantiis aanuu sura geli karin. Haddaan sii macneeyo, waa hal nidaan oo labo waji leh, sida lacagta labadeeda dhinac. Waa Khilaafadddii arlada ee socotay Aadan laga soo bilaabo, ee ahayd Alle raalli-gelinti iyo islaaxa nolosha dhulka.
4- Waa Nidaam labaddiisa dhinac xaqiijinnaya Aduunka maciishadd wanaagsan, Aakharana janno.
5- Waa Nidaam si caddalad ah, ay geedkiisa u harsan karaan kuwa Muslinka ah, iyo kuwa aan ahaynba. ( sinan ).
6- Waa Nidaam damaanad-qaadaya XORIYADDA qofka Aadamaha, dhinac walba,
Nidaamka islaamka, maa daama uu yahay mid Banii Aadamka oo dhan loogu talo-galay, oo waliba la jaan-qaadaya casri kasta, waxaa loo soo dejiyay qawaaniin lagu habaynayo labadii dhinac ee diinta iyo dawladda, waxaana la yiraahaa qawaaniintaa Rabbaaniga ah SHARIICA Oo macnaheedo yahay jidayn, oo kala jideesa waxa qofku xaq uu leeyahay iyo waxa waajib loogu leeyahay, waxa loo ogolyahay iyo waxa laga reebay.
Waxayna u kala baxdaa qawaaniinta Islaamiga ahi ( Shariica) saddex qaybood oo waa-wayn oo kala ah:
1- CIBAADAAT:_ oo ah kuwa qofku Aakhiradiisa ku suubbinayo. Mas’uuliyaddeeduna waa mid shakhsi ah oo qof-qof loo leeyahay. ( individual responsibility ) oo waxay ku sasbsan tahay xiriirka addoonka iyo rabbigiis, sida Salaadda, soonka xajka—IWM:
2- MUCAAMALAAT: waxay khusaysaa waxa la xiriira masaalixda dadka iyo macaashkooda, sida gancsiga, shaqada, shirkadaha…IWM, Oo dadka macaamilayaa ayaa u leh xiriyadd buuxda wixii danahooda u soo jalbinaya, marka laga reebo wax- yar oo dhibaato u keenaya, oo laga reebay sida Ribada dulsaarka ah, Khayaanada, ka beensheegidda badeecadaha… iwm.
3- CUQUUBAAT: oo waxa ay ku jahaysantahay Dhawridda iyo ilaalinta danaha guud ee Bulshada, waxaana lagu magacaabaa XUDUUD, oo macnaheedu yahay ta kala saaraysa danta gaar iyo tan guud. Waxay u dhigantaa, waxa loo yaqaan PENAL CODE, waxayna llaalisaa NAFTA, MAALKA, SHARAFTA, AMNIGA GUDAHA IYO KAN DIBADDA..IWM.
Qaybtaan Mas’uuliyaddeda waxa iska leh oo ay khaas u tahay Dawladda ( Government responsibility).
DAWLADDII ISLAAMKA UGU HORAYSAY:
Sida la wada yaqaan, Nabigeenii suubana (SCS) Dacwada Diinta , wuxuu waday muddo 20 iyo xoogaa sana ah. Tobankii sano ee hore, wuxuu joogay Makka , wuxuu waday Nidaamka islaamka dheniciisa kawaad, oo ah Dacwo iyo cibaaado, sababtuna waxay ahayd Reer Makka oo diiday in rumeeyaan Nabiga scs, Muslimiintuna waxay ahaayeen tiro yar oo ducafa ah oo la cadaadiyo, oo qaarkood laba jeer lafahooda ula carareen geeska Africa ( Al-Xabasha - Tigre).
Tubankii sano ee danbi, SCS wuxu deganaa Madiina, markii uu halkaa u Guureen( Higra).waxuu ku daray dhinicii labaad ee Nidaamka Islaamka ee ah Dawladnimada.
Madiina waxuu ka dhisay scs dawladd nidaamkeeda lagu saleeyay shareecada, iyo wixii heshiisyo ah ee lagu ilaalinayo danaha qaybaha kala geddesan ee Bushda,
Nabigu scs Marka uu Madiina salka-dhigay, wuxuu Macaahado, iyo heshiis u sameeyay qaybahan soo socda:
1- Al-aws oo ah qabiil Carab ahoo reer Madiina ah.
2- Al-khazraj oo ah iyana qabiil kale oo Carab ah. Labadaan reer waa kuwa Nabiga ku martiqaaday magaaladooda Midiina. Waxaana lagu magacabay Ansaar, ama u gargaarayaal
3- Waxaa kale oo diganaa Jaaliyado Yahood ah , oo laga tiro badanyahay, Laakiin haysta xoog dhaqaale iyo mid siyaasadeedba.
4- Asxaabtii Rasuulka scs ee reer Makka, oo lagu amray in ay u guuraan Madiina, waxaana lagu magacaabay Muhaajiriin.
Afartaan qaybood baa ugu mahimsanaa reer Madiina , inkasta ooy jireen Aqilliyaad kale, sida Nassarada iyo mushrikiinta.
Duulalkaas Wuxuu SCS u dejiyay Dastuur qoraal ah oo caddaynaya xuqqoqda iyo waajibaadka qaybahaas Mujtamaca, Haddan Dastoorkaa qoddobbadiisa ,waxa ka soo qaadanno waxaa ka mid ahaa:
1- Dadku waa Ummadd midaysan oon la kala qaybin karin, waana muwaadiniin kulligood.
2- Dadku waxay ka SIMANYIHIIN xuquuqda iyo waajibka.
3- Waxaa la iska kaashanayaa iska-difaacidda dulmiga iyo Gar-darada
4- Kuwa aan Muslinka ahayn, waxay leeyihiin diintooda iyo maalkooda oo loo damaanad- qaaday, mana lagu khasbayo diinta Islaamka.
5- Dawladda waxay u gaargaaraysaa kuwa aan muslinka ahayn sida ay ugu gargaarayso kuwa muslinka ah markii laga gar-daran-yahay.
6- Umadda waxaa ka reeban in ay caawiyaan Cadawga dawladda.
7- Qofna loo qaban maayo danbi qof kale gaystay.
8- Nabadda, amniga,iyo xoriyadda .dhaqdhaqaaqa waxaa sugaya Dawladda.
9- Mujtamaco wuxuu ku dhisanyahay Iskaashiga khayrka iyo Alle ka cabsiga, mana la isu kaashanaayo dulmi iyo Alle caasi.
10- Waa Taan uga dan-leeyahay eh : DAWLADDA WAXAA MADAX KA AH NABI MOXAMED SCS. Wixii khilaaf ka dhasha qodobada SAXIIFADDAN, waa sidii loogu magac bixiyay, waxa garsoore ka ah isaga csc.
Saxiifaddan dastuuriga ah ee Nabigeenno SCS saldhigga ugu dajiyay Dawladdii ugu horeysay ee Islaamiga ahayd, waxaa lagu tilmaama in tahay tii ugu horaysay ee lagu moojiyo, si caddaan ahna loogu qeexay waxa maanta loo yaqaan Mabaadi’da XUQUUQDA AADAMAHA..
Waxaa ka marag-kacaya taas in xattaa Ra,iisnimada Dawladdaa Madiina , in qaybihii bulshadaasi u gaarteen isaga SCS, isaga oon oron anigaa Alle isoo diray oo wax-walba iska leh, sidii waagaa Caalamka ka socotay, ilaa haddana meelaha qaarkood ka socota.
DHISMAHA HAY’ADAHA DAWLADDA:
Dastoorkaa kaddib wuxuu markiiba ku dhaqaaqay SCS taagidda hay’adaha dawladda. Waxaa la sameeyay haya’adda Maailyadda oo yaqaan ( baytul-maal) Gashaandhigga ( Jihaad) Garsoorka ( Cadalad) diinta ( Dacwa).... iwm.
Inkasta oo uu scs madax ka wada ahaa haya’adaha dawladda, haddana wuxuu kaashan jiray Asxabtiisa, siiba mid kasta hawsha ku habbon-yahay Arimaha maamulka la xiriirana, wuxuu ka la tashan jiray iyaga, waxaana la tixgelin jiray khibradda iyo takhasuska. Wixiise Waxyi ku yamaado, waxaa loo fulin jiray sida uu ku yimid oo tashi kama fura. Markii ay Asxaabto rc, arkaan arin si aragtidooda ka duwan , u maamulayo Nabigu scs, way waydiin jirayn: Nabigii Allaw ma waxyibaa mase Ra’yi ? haadday jawaabtiiso noqoto waa Ra’yi,-waana u badnaan jirtay- markaasay taladooda soo jeediyaan, sida qaalibka ahna wuu qaadinjiray scs.
Goboladda waxaa loo magacaabaa wakiillo lagu soo xulay aqoon, karti iyo daacaddnimo.
Hadduu scs safar u baxo, Madiina qof buu u magacaabaa ku sime ah.
Sidaas bay ku socotay.
Sidaas bay ku hirgashay, ooy ku taabbu-qaadday Dawladdii Islaamka ee uu scs, dhisay Midiina, Muddo sedeed sano aan ka badnayna, waxay dagaal la’aan ku furteen Makka Mukaramah. Toban sano markay u buuxsantay Dawladdaan wxayawoodidii ku hanatay dhulka loo yaqaan Jaziiradda Carabt aoo dhan.
Intii uu noolaa scs, Dadku waxay xur u ahaayeen wixii macaamul iyo macaash ah, wixii aan Alee xaaraamayn, Dawladdu mas’uul waxay ka tahay, aminiga gudaha iyo kan dibadda, garsoorka iyo fulinta qawaanintta oo ku dabaqan shareecada Alle ku qeexay Kitaabka iyo tusaalooyinka Nabiga scs qawl iyo ficil oo Sunnaha., si dadka iyo dawladdaba looga ilaaliyo wax dhibaato u keenayaa.
Markii Alle oofsaday scs, halkii bay ka sii-wadeen khulafadiisii raashidiinta ahaa : Abu-Bakar, Cumar, Cismaan iyo Cali,-- dhammaantod Alle raali ha ka noqdo eh- hawshii, iyaga oo raacayaa raadkiisii scs.
Dawladda dhulkeedii wuu sii ballaratay, mas’uuliyaddii way sii waynaatay. Hay’adihii way kordheen, laakiin nadaamkii, mabaadi’dii iyo shuruucdii waxba iskama beddelin, sababta oo ah waxaa Nabigu scs uga tagay Nidaam dhamaystiran oo buuxa, oo xaqiijinayaa Liibaanta Aakhiro iyo tan adduunba.
Islaamku waxuu ku faafay dunida dacalladeeda oo idil, xaggaa bariga wuxuu gaaray Dalka Shiinaha, xaggaa galbeedkana waxauu gaaray kunfurta iyo bartamaha Europ, waxaa dhismay dawladu waa-wayn oo gaarsiiyay Aadamaha Xadaarad iyo Il-baxnimo, oo iftiinkeeduna wali u baxayo Caalamka,
Islaamku wuxuu dunida ka ahaa quwadda ugu wayn (supper-pawer ) waqti ka badan 13 qarni. Waxaa xukunka kala daxlay khilaafadu is-daba jooga, Raashidiintii, waxaa ku xigay, khilaafaddii Amawiyiinta, waxaa ku sii xigay tii Cabbaasiyiinta, tii Amawiyiinta ee Al-Andulus( spain) tii Faddimiyiinta, tii Cusmaaniyiinta oo ah khilaafaddii Islaamka tii ugu danbaysay, oo reer Galbeedkuu baabi’iyeen dagaalkii kawaad ee Caalamka, kaddib markii iyaga iyo Gemany laga adkaaday.
Caalamka Islaamku Dagaalkaa kaddib wuxuu gacanta u galay-guud ahaan- Gumaystayaashii reer Europe, halgan kharaar kaddib, waxaa dhashay dawladu lagu dhisay hab ku salaysan qawmiyadu iyo jinsi oo ah kuwa hadda jira oo gaarayaa 50 dal wax ka badan, waxaana ku nool dad kor u dhaafay hal Milyaardi iyo rubuc muslimiin ah.
Taarikhdaa is-daba joogta Nidaamka Islaamku isma bedelo, si kasta oo duruufto isu beddesho, oo wuxuu ku salaysanyahay labdii dhinac ee ahaa DIINN IYO DAWLADD, waana Nidaam rabaani ah, oo sidaas ahaanaya ila Aduunka la soo duubo.
Haddaba xaaladaa Soomaaliya ka jirta iyo waxa lagu magacaabo MAXKAMADAHA ISLAAMIGA XAGGII BAY KA GELAYAAN NIDAAMKA ISLAAMIGA AH EE EEBE AADAMAHA U SOO DIJIYAY, NABIGEENII SUUBANAANA U qotomiyay dhidibada tiirarkana ugu Aasya DAWLADDII ugu horasay Madiina 15 QARNI KA HOR???.
Qaybta 2aad halkan ka akhri.....